ရေကြီးစဉ် အတွင်း ဘေးပတ်လည်တွင် ရေများဝိုင်းနေသော်လည်း သောက်သုံးရန် မသင့်ပေ။ အကယ်၍ သောက်သုံးခဲ့ပါလျှင် ဝမ်းလျှောခြင်း ၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း တို့ ဖြစ်နိုင်သည်။ ရေကြီးခြင်း ကို ကာကွယ်ရန် သောက်သုံးရေ စုဆောင်းခြင်း၊ သဲအိတ်များ စုဆောင်းခြင်း ဖြင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
↑ Directive 2007/60/EC Chapter 1 Article2 Archived6November 2015 at the Wayback Machine.. eur-lex.europa.eu. Retrieved on 2012-06-12.
↑ Glossary of Meteorology (June 2000). Flood. Archived 24 August 2007 at the Wayback Machine. Retrieved on 2009-01-09.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရေကြီးခြင်း&oldid=738880" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၄ မတ် ၂၀၂၂၊ ၀၃:၅၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။